वैदेशिक रोजगारी भन्दा ठेलामा व्यापार गर्दा लाखौँ कमाइ
प्रेरणा तिमल्सिना पुस २२, २०७५ | आइतबार
गहुँगोरो अनुहार, खाइलाग्दो चेहेरा अनी २८ वर्षको हाराहारीमा घुमिरहेको उमेर । ललितपुरको इमाडोलमा यही अनुहार ठेलामा तरकारी राखेर बेचिरहेको भेटिन्छ । ठेलामा व्यापार गर्नेहरु प्राय गरेर मधेशी मुलका हुन्छन् कि त अधवैशे महिलाहरु मात्र भेटिन्छन् । तर यहाँ यी पहाडी मुलका युवकको ठेला मोह हेर्दा लाग्छ यिनको वर्तमान र भविष्य नै यही हो ।
श्याम पाण्डे उमेरले भर्खर २८ वर्षका भए । जे गर्छु नेपालमै गर्छु भनी लेखिएको टिसर्ट लगाएर ठेलामा तरकारी राखेका पाण्डेलाई ग्राहकको भिड अनुसार तरकारी बेच्न भ्याईनभ्याई छ । झण्डै ४ वर्ष धन आर्जन र जीविकोपार्जनको निम्ति विदेशमा श्रम गरि फर्केका पाण्डेको लागि विदेशको लाखौ कमाईभन्दा नेपालमा परिवारसँग बसेर कमाएको अहिलेको आम्दानीले सन्तुष्टि दिलाएको छ ।
श्याम ठेलामा तरकारी बेच्दै हिड्छन् भने उनकी श्रीमतीले मासु पसल राखेकी छन् । यि दुईको कमाईले घरखर्चमात्र चलेको होइन बचतपनि हुने गरेको छ । विदेशमा मात्र कामको सम्भावना र नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन । अनी नेपालमा काम गर्दा कामलाई सानो र ठूलो भन्नेहरुले श्यामबाट केही सिक्ने की ?
पौरखले कमाएको उनको खुसी ह्यासट्याग स्माइलको आजको अंकमा पस्किएका छौं ।
नेपाली सिनेमाको विदेशी बजार ? कति सम्भव, कति असम्भव ?
मकैबाट सुन फलाउने राज र दुर्गाबहादुरको मन छुने कथा
काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर नारा मात्रै लगाएर भएन अब यहाँका प्रोडक्टलाई नयाँ तरिकाले प्रमो...